Isitudiyo esithulile, esizimele e-Khandallah - I-Airbnb
Isitudiyo esithulile, esizimele e-Khandallah
Wellington, i-New Zealand
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Jack And Janine
Ngo-155 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Jack And Janine Ungumbungazi ovelele
Sihlinzeka ngesitudiyo esizimele, esivulekile sohlelo oluvulekile esitholakala ngenhla kwegalaji lethu, esihlehlisiwe ukusuka emgwaqeni. Isici esihle sinikeza ukubukwa kwehlathi lendabuko nobumfihlo obudingayo lapho ungekho ekhaya. Lesi situdiyo silungele abahambi bodwa, izithandani, nalabo abasebhizinisini. Kuwuhambo olufushane lwemizuzu emihlanu ukuya ezixhumanisini zamabhasi nezesitimela eziya eCBD, inkundla yezemidlalo kanye nezindawo zokuzijabulisa. Kuphinde kube yimizuzu eyi-10 ukusuka ezikhumulweni zesikebhe.
Lesi sikhala sinekamelo elilodwa elikhulu elinombhede olingana nendlovukazi, osofa ababili, i-TV ne-DVD player, itafula nezihlalo ezi-4. Kukhona anhlobonhlobo ama-DVD ongakhetha kuwo ekamelweni futhi i-WiFi yesivinini esiphezulu iyatholakala, i-prefect evela kumasayithi okusakaza afana ne-NetFlix. Indawo yasekhishini incane futhi iyisisekelo ngaphandle kwezindawo zokupheka kodwa kunefriji yasebhawa, i-toaster kanye ne-microwave. Kukhona igumbi lokugeza kanye negumbi elihlukile lendlu yangasese nosinki. Siphinde sikunikeze okomisa izinwele, okusansimbi kanye nebhodi loku-ayina ukuze uyisebenzise.
I-wifi esheshayo – 155 Mbps
Ngemisebenzi yasendaweni, sincoma ukuhambahamba amaminithi angu-5 phansi komgwaqo waseBurma ukuze uthole ukudla okumnandi kwebhrantshi, isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa e-AutoMat ekhoneni likaBurma Road kanye no-Baroda Street. Sicela wazi ukuthi zivaliwe ngoMsombuluko.
Khuphuka iNtaba iKaukau. Iyingxenye ye-Northern Walkway futhi inokubukwa okuhle kwedolobha netheku, i-Hutt Valley kanye ne-Tararua Ranges, kanye nokuwela i-South Island. Amathrekhi aqala ku-Woodmancote Road kanye naku-Simla Crescent e-Khandallah, futhi kunendawo yokupaka kuzo zombili izintuba zokungena. Uma unesibindi, cwilisa echibini lasehlobo laseKhandallah lapho usendleleni eya ekhaya - indawo enhle, ehlala ehlathini phansi kweMt Kaukau. I-Café du Parc nayo iseduze ukuze uthole ikhefu lokuqabuleka!
Ibungazwe ngu-Jack And Janine
Jack and Janine Crowley
Sizimisele ukusiza nganoma yimiphi imibuzo futhi sabelane ngolwazi lwethu nge-Wellington neKhandallah okuhlanganisa nezindawo zokudlela ezinhle kakhulu, amabha, izindawo zokudlela njll. Sihlose futhi ukuhlangana nezivakashi lapho sifika, kodwa sicela uqaphele ukuthi singabazali abasebenzayo.
Sizimisele ukusiza nganoma yimiphi imibuzo futhi sabelane ngolwazi lwethu nge-Wellington neKhandallah okuhlanganisa nezindawo zokudlela ezinhle kakhulu, amabha, izindawo zokudlela…
UJack And Janine Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Wellington namaphethelo